The MYAWADY Daily: မန္တလေးမြို့ရှိ ပြတိုက်များနှင့် ပုဂံပြတိုက်တို့ကို အဆင့်မြှင့်တင် မွမ်းမံရန်လျာထား
The MYAWADY Daily
www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily
my documents live!
All Myanmar Journals Download (Click here)
Shan State Govt
သစ်ထူးလွင် Myanmar News Now
BBCBurmese.com | ပငျမစာမကျြနှာ
နြူကလီးယားဖကျြသိမျးပှဲ သတငျးယူဖို့ မွောကျကိုရီးယားခှငျ့ပွု
ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ရဲ့ ပြောင်းဖူးလေ … ပြောင်းဖူး ..
ရခိုင်ပြဿနာဖြေရှင်းရေး နယူးယောက်မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်း သမ္မတ Trump ထံစာပေးပို့
Press Release: International Development Committee report must spur UK to act on Rohingya atrocities
ကအေိုငျစီ – KIC News
အရှေ့ပိုးကရင် အထက်တန်းဖတ်စာ စိတ်ဝင်စားမှု ပိုရှိလာ
စစ်တွေမြို့၏ အဓိကရေဖြန့်ဝေနေသည့် ကန်တော်ကြီး ရေလုံးဝ ခမ်းခြောက်၊ စစ်တွေ ရပ်ကွက်တစ်ခ်ျို့တွင် ရေရှားပါးမှု ဖြစ်ပေါ်နေ
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ရောင်စုံကာတွန်းများ (၁၉ မေလ ၂၀၁၈)
Myanmar Daily Mail
ရန်ကုန်တွင် (၂၂) ကြိမ်မြောက် World Police Band Concert အခမ်းနား ပြုလုပ်မည်
Pyi Chit Thar
Monsanto နှင့် BASF ကုမ္ပဏီများမှ ထုတ်သောပေါင်းသတ်ဆေး များသည် စိုက်ခင်းများကို ပျက်စီးစေပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှု ကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်
DHAMMA GARDEN CENTRE
The Myanmar Independent News Journal
လူငယ်သဘာဝ စိတ်ခံစားမှုကြောင့် လုပ်ကြံမှုဖြစ်ဟု ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးပြော
စွဲလန်းမှု နဲ့ မိုင်တိုင် ၃၀
KNLA တပ်မဟာ(၅)တွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦး မြေမြှုပ်မိုင်း နင်းမိပြီး တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ
မှော်ဘီမြို့တွင် အပူရှောင်စခန်း ၁၅ ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
New Myanmar News
သေနိုင်လောက်သည့် အခြေအနေမှာ အသက်မသေခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ် ဖိုးကံကောင်း
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ မဲဆွယ်ဗွီဒီယိုမှ အလွဲများ (အပိုင်း-၂)
မြေနီကုန်းခုံးကျော်တံတား တပ်မတော်နေ့တွင် စတင်ဖြတ်သန်းနိုင်မည်
LRDP attented to MMN Conference ( In Combodia)
Peaceful Burma (ငြိမ်းချမ်းမြန်မာ)平和なビルマ
ဘူးလက်လှဆွေပြောတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အလွှဲများနှင့် လုပ်စားများ
24th ASEAN SUMMIT
သန်းခေါင်စာရင်းသစ်သည် “ခိုးဝင်”တွေကိုခဝါချပေးခြင်း (Ethnicity Laundering) ဖြစ်မလာသင့်
Burma Canadian Association ( Community Event )
မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်
မြန်မာ့ခရီးသွားတိုးတက်ရေး အကူအညီရဖို့ အလားအလာကောင်း
Views Of Myanmar
ထောင်သားလောက် ရိက္ခာနဲ့ တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်း သေလမ်းလျှောက် နေကြတဲ့ ငတုန်းများ
Quick Boot ကိုအသုံးပြု၍ Bootloader/ Recovery Mood သို့ဝင်ရောက်ခြင်း
KIA အဖွဲ့ ရတနာတောင်တန်း ကုမ္ပဏီအား မိးရှို့ဖျက်ဆီး
Voice Of Myanmar
ယနေ့ကျောင်းဆင်း(၈)နှစ်ပြည့်၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ စာမျက်နှာ (၁၀)ပါ စစ်တက္ကသိုလ်၊ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၇) ကျောင်းဆင်းများ၏အလှူတော်....နတ်လူသာဓုခေါ်စေသောဝ်....
အတ္တကင်းစင် ဒီမိုကရေစီ လွင်ပြင်
ကမ္ဘာ့သတင်းများ 26/10/2012 နိုင်ငံတကာသတင်း ရခိုင်ပြဿနာ ကုလစိုးရိမ်
True News Myanmar
ရခိုင်အရေးအခင်း၌ သံသယရှိ၍ ထိန်းသိမ်းထားသော ကုလဝန်ထမ်းများ ပြစ်မှုများတွင်အမှန်ပတ်သက်မှုရှိကြောင်းနယ်စပ်ရေးရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား
HERO OF MYANMAR
လေးစားထိုက်တဲ့ သူကို လေးစားထိုက်တဲ့ နေရာမှာပဲထားပါ................
ဂျာမိုင်ကောင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်အယောင်ဆောင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ
လာမယ့် ၂၀၁၅ ခွပ်ဒေါင်းဆိုရင်တော့ ရိုက်ချက်ပစ်မယ့်ပြည်သူများ
လှမ်း ၀င့် လို့ ချီ ခေ တ် သစ် ဆီ သို့
ဘက်ပေါင်းစုံမှ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးသမားများ Facebook အပါအ၀င် အွန်လိုင်းမီဒီယာ၌ နေရာယူမှု များလာခြင်းအတွက် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော ဥပဒေတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းရေး လိုအပ်လာ
မန္တလေး- မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းအား KIA က မိုင်းထောင်ဖျက်ဆီးသဖြင့် ပြည်သူများဒဏ်ရာရ၊ သွားလာရေး ခက်ခဲလျက်ရှိ
KIA ( ကချင် ) သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ မှ မိုင်ထောင်ဖောက်ခွဲယုံသာ မကပဲ ပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင် ပြုလုပ်လာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တပ်မတော်သားတစ်ဦး၏ ရိုးရှင်းပွင့်လင်းသောအမြင် အပိုင်း(၁)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တပ်မတော်သားတစ်ဦး၏ ရိုးရှင်းပွင့်လင်းသောအမြင် (အပိုင်း - ၁)
ဇာနည်မောင် ရဲ့ ခံစားချက်တချို့ စုစည်းရာ
Kyee Say Ta Man
Myo Chit Myanmar | Dedicated for the people of Myanmar
National League for Democracy - Burmese
The Power of Fraternity | စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား
BURMA VJ MEDIA
Human Rights Myanmar
ကြည့် တတ် မြင်တတ် စေချင်
Pyi Chit Tar
News @ MMSY
မန္တလေးမြို့ရှိ ပြတိုက်များနှင့် ပုဂံပြတိုက်တို့ကို အဆင့်မြှင့်တင် မွမ်းမံရန်လျာထား
Bagan Archaeological Museum
မန္တလေး ၊ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅
လာမည့်နှစ်အတွင်း မန္တလေးမြို့ရှိ ပြတိုက်များနှင့် ပုဂံပြတိုက် တို့ကို အဆင့်မြှင့်တင် မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်ရန် လျာထားကြောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဦးလွင် ၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
အဆိုပါ အဆင့်မြှင့်တင် ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း များကို ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ပြတိုက်များကိုသာ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ပြတိုက် သုံးခု နှုန်းဖြင့် ၁ဝ နှစ်တစ်ကြိမ် အလှည့်ကျ ပြင်ဆင် အဆင့်မြှင့်တင် မွမ်းမံခြင်းများ လုပ်ဆောင် ပေးလျက်ရှိကြောင်း ၊ လာမည့်နှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဧည့်သည်များ အထူးစိတ်ဝင်စား မှုရှိသော မန္တလေးမြို့ရှိ ရှေးဟောင်းပြတိုက် များနှင့် ပုဂံပြတိုက် တို့ကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းပြတိုက်များကို အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်းများ ဆောင်ရွက် ရခြင်းသည် နိုင်ငံသားတိုင်း မိမိနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များနှင့် သမိုင်းကြောင်း များကိုပိုမို သိရှိစေရန် ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရမည့် အသိပညာများ ခံစားသိရှိ လာနိုင်စေရန် ပါဝင်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်လူရွယ်များ အနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံနှင့် မိမိလူမျိုး တို့၏ သမိုင်းကြောင်းကို သိရှိထားရန် လိုအပ်သည့် အတွက် လေ့လာမှု အားကောင်း လာစေရန် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအလိုက် စာသင်ကျောင်း များ၌ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက ဆွေးနွေး စည်းရုံးမှုများ စတင်ပြုလုပ်ဆောင် နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ပြတိုက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိပြီး ယင်း ပြတိုက်များ၌ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုမှု နည်းနေသေးသဖြင့် အခမဲ့ဝင်ခွင့် ပေးမည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း စတင်လုပ်ဆောင် နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ပြတိုက်များ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွင် အများပြည်သူ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များနှင့် ကမ္ဘာ့လှည့် ခရီးသွား ဧည့်သည်များ စိတ်ဝင်တစား လာရောက်လေ့လာ ကြသော ပြတိုက်များကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ် ၊ စာ(၄)
Posted by myawady at 2:04 PM
Labels: ခရီးသွားလုပ်ငန်း, တည်ဆောက်ရေး
March 2018 (196)
February 2018 (221)
January 2018 (225)
December 2017 (249)
October 2017 (209)
September 2017 (201)
August 2017 (167)
July 2017 (304)
June 2017 (319)
May 2017 (341)
March 2017 (330)
February 2017 (272)
January 2017 (219)
December 2016 (284)
November 2016 (354)
October 2016 (247)
September 2016 (164)
August 2016 (177)
June 2016 (239)
May 2016 (255)
November 2015 (211)
October 2015 (224)
September 2015 (148)
August 2015 (256)
March 2015 (240)
February 2015 (256)
January 2015 (246)
December 2014 (270)
August 2014 (136)
March 2014 (122)
January 2014 (130)
December 2013 (157)
October 2013 (194)
September 2013 (183)
August 2013 (134)
June 2013 (112)
February 2013 (151)
January 2013 (184)
December 2012 (187)
23-5-2018 Myawady Daily
22-5-2018 Myawady Daily
21-5-2018 Myawady Daily
18-5-2018 Myawady Daily
17-5-2018 Myawady Daily
16-5-2018 Myawady Daily
15-5-2018 Myawady Daily
14-5-2018 Myawady Daily
11-5-2018 Myawady Daily
10-5-2018 Myawady Daily
9-5-2018 Myawady Daily
8-5-2018 Myawady Daily
7-5-2018 Myawady Daily
4-5-2018 Myawady Daily
3-5-2018 Myawady Daily
23-5-2018 Yadanarpon Daily
22-5-2018 Yadanarpon Daily
21-5-2018 Yadanarpon Daily
18-5-2018 Yadanarpon Daily
17-5-2018 Yadanarpon Daily
16-5-2018 Yadanarpon Daily
15-5-2018 Yadanarpon Daily
14-5-2018 Yadanarpon Daily
11-5-2018 Yadanarpon Daily
10-5-2018 Yadanarpon Daily
9-5-2018 Yadanarpon Daily
8-5-2018 Yadanarpon Daily
7-5-2018 Yadanarpon Daily
4-5-2018 Yadanarpon Daily
3-5-2018 Yadanarpon Daily
မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၁)၊ အမှတ် (၃၂)
မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၁)၊ အမှတ် (၃၁)
မိုးသောက်ပန်း အတွဲ (၂၁)၊ အမှတ် (၂၇)
ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၆၈၈)
တေဇရုပ်စုံ အတွဲ (၂၉) ၊ အမှတ် (၆)
သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၂၀)
မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆၆) ၊ အမှတ် (၁)
ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၆၈၇)
မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆၅)၊ အမှတ် (၁၂)
သုတအလင်း မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၁၉)
တေဇရုပ်စုံ မဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၂၉)၊ အမှတ် (၅)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊အမှတ် (၂၀)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆) ၊ အမှတ် (၄၀)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆) ၊ အမှတ် (၃၉)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆) ၊ အမှတ် (၃၈)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊ အမှတ် (၁၉)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊ အမှတ် (၁၈)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊ အမှတ် (၁၇)
သုတအလင်း မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၁၈)
အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၆) ၊ အမှတ် (၃၇)
မိုးသောက်ပန်း ဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊ အမှတ် (၁၆)
ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၆၈၆)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆)၊ အမှတ် (၃၆)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁)၊ အမှတ် (၁၅)
မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆၅) ၊ အမှတ် (၁၁)
အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၆) ၊ အမှတ် (၃၃)
မိုးသောက်ပန်း ဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊ အမှတ် (၁၂)
သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၁၇)
တေဇ ရုပ်စုံ အတွဲ (၂၉) ၊အမှတ် (၄)
တေဇရုပ်စုံ အတွဲ (၂၉) ၊ အမှတ် (၃)
ငွေတာရီ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၆၈၅)
မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆၅) ၊အမှတ် (၁၀)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆) ၊အမှတ် (၃၁)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆) ၊အမှတ် (၃၀)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊အမှတ် (၁၁)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊အမှတ် (၁၀)
မိုးသောက်ပန်း ဂျာနယ် အတွဲ (၂၁)၊ အမှတ် (၉)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆)၊ အမှတ် (၂၉)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆)၊ အမှတ် (၂၈)
မိုးသောက်ပန်း ဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊အမှတ် (၇)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆)၊ အမှတ် (၂၆)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊အမှတ် (၅)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆) အမှတ် (၂၅)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) အမှတ် (၄)
အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ (၆) ၊ အမှတ် (၂၄)
သုတအလင်း မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၁၆)
တေဇရုပ်စုံ အတွဲ (၂၉) ၊ အမှတ် (၂)
မြ၀တီရသစုံမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆၅) ၊အမှတ် (၉)
အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ(၆) ၊ အမှတ် (၂၃)
ငွေတာရီ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၆၈၄)
မိုးသောက်ပန်း ဂျာနယ် အတွဲ (၂၁) ၊ အမှတ် (၃)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁)၊ အမှတ် (၂)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆)၊ အမှတ် (၂၁)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၁)၊ အမှတ် (၁)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၀)၊ အမှတ် (၄၆)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆)၊ အမှတ် (၂၀)
သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၁၅)
မြ၀တီရသစုံမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆၅)၊ အမှတ် (၇)
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ (၆)၊ အမှတ် (၁၉)
ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၆၈၃)
မိုးသောက်ပန်း ဂျာနယ် အတွဲ (၂၀)၊ အမှတ် (၄၄)
တေဇရုပ်စုံ အတွဲ (၂၉)၊ အမှတ် (၁)
ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် အတွဲ (၂၁)၊အမှတ် (၂၀)
Mobile Guide Journal (Vol4,No 4)
ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဂျာနယ် အတွဲ (၁၄) ၊ အမှတ် (၃၃)
အင်အား အားကစားဂျာနယ် (Vol 29 No 5)
The Popular News (Vol9No 8)
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ (၂၀)၊ အမှတ် (၄၃)
Mobile Guide Journal (Vol 4, No 3)
Channel Weekly Sport (Vol 4, No 21)
8 Days Journal
Feb 2017 Cover
March 2017 Cover
Popular Post Last7days
မြဝတီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၁-၅-၂ဝ၁၈) Download Links MediaFire Scribd 2152018 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၈-၅-၂ဝ၁၈) Download Links MediaFire Scribd 1852018 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
ရတနာပုံနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၁-၅-၂ဝ၁၈) Download Links MediaFire Scribd 2152018 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
MMA ကမ္ဘာ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံ ခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေသည်ဟု အောင်လအန်ဆန် ပြောကြား
MMA ကမ္ဘာ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲ အတွက် လေ့ကျင့်နေသည့် အောင်လအန်ဆန်ကို တွေ့ရစဉ်။ ရန်ကုန် ၂၂-၅-၂ဝ၁၈ MMA ကမ္ဘာ့မစ်ဒယ်...
မြဝတီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၂-၅-၂ဝ၁၈) Download Links MediaFire Scribd 2252018 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၇-၅-၂ဝ၁၈) Download Links MediaFire Scribd 1752018 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
ပုသိမ်မြို့တွင် မှုခင်းများကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် လူစည်ကားရာနေရာများ၌ လုံခြုံရေး (CCTV) ၇၆ လုံး တပ်ဆင်သွားမည်
ပုသိမ် ၁၈-၅-၂ဝ၁၈ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့တွင် အများပြည်သူ လုံခြုံရေးအတွက် မှုခင်းများကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေ...
App Game and Software
BusyBox Pro v52 Apk
Computer Technical Notes & Sharing Softwares
Windows9အချက်အလက် အသေးစိတ် ထွက်ပေါ်လာ
ပေသီး (IT Advance)
Window 7/8 and Microsoft Office 2010/2013 Activator
Computer,Pen Drive,Memory Card ထဲက မှားဖျက်မိတာတွေ ပြန်လိုချင်ကြရင်
kozaw357 ၏ စိတ်ကူးအိပ်မက်များ......
Myanmar IT Development ရှိ နောကျဆုံးလုပျဆောငျခကျြမြား
Myanmar Mobile Software Developer
Copyright 2010 - The MYAWADY Daily
Powered by FileHippo.com
FB Like page